ラン　ピャ　チェ: 2010
Amnesty's Write for Rights campaign.
U2 - WALK ON - AUNG SAN SUU KYI TRIBUTE (BARCELONA...
ビルマ（ミャンマー）総選挙への抗議　デモ行進のご案内（10/27. 14:00-三河台公園（六本木）...
ア　リン　エイン　雑誌　（Luminary Magazine ）
"People must work in unison. Only then can we achieve our goal."
–Daw Aung San Suu Kyi, upon her release on November 13th, 2010
Support Write for Rights today!
November 13th, 2010 wasagreat day for human rights supporters worldwide – Aung San Suu Kyi, Nobel Peace Prize winner who has spent 15 of the last 21 years in detention, was freed.
Aung San Suu Kyi,ahuman rights advocate, has been the focus of immense public pressure both in her home country of Myanmar and throughout the world. Last year alone, tens of thousands of letters were sent demanding her release.
Many of those letters were sent as part of Write for Rights, Amnesty International’s Global Write-a-thon. Each year, activists from every region of the world write real letters to bring freedom to prisoners of conscience, demand justice for survivors of torture and offer hope to human rights defenders under attack.
Write for Rights 2010 begins in2weeks, and will focus on 12 priority cases around the world. We need your help to sustain this life-changing campaign.
Makeagift to help support Amnesty International’s 2010 Write for Rights.
Aung San Suu Kyi knows the power of your letters
The letters generated during Write for Rights will change lives. Donate to support Write for Rights today.
Write for Rights – the largest letter-writing event in the world – is part ofarich, deep history of human rights triumphs. Our global human rights network has helped free numerous prisoners of conscience.
U2 - WALK ON - AUNG SAN SUU KYI TRIBUTE (BARCELONA 360 TOUR)
ビルマ（ミャンマー）総選挙への抗議　デモ行進のご案内（10/27. 14:00-三河台公園（六本木）)
■日　時： 2010年10月27日（水)　14：00～15：00　集会
ＢＯＪと言うＢｕｒｍａ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｊａｐａｎ（ビルマ　事務所）があるビルに行われました。当会議にＢＯＪ，
私の先生（西田 敦様）なら　在日ビルマ人に関係がございます方々は　ご存知してますと　思います。
在日ビルマ人にいろいろな　御支援、御応安、御手伝い　して下さっていらっしゃる方です。先生のことなら
一昨日先生と私　会った時も　私に（朝日新聞を中心とした。。ビルマ関連新聞見出しの覧表、１９８８年７月から２０１０年まで）先生が　御作りになっていますのを　下さいました。とっても　喜びました。先生！！！本当に　有難うございました。
■ビルマ国内 12:44 ビルマ国内 - きょうのビルマのニュース～ビルマ（ミャンマー）関連のヘッドラインニュース を含むブックマーク
* ミジマ: 人道に対する罪が起きている疑いについて　国民民主連盟（NLD）のウィンティン氏、カナダも国連による調査委員会設置を支持するべきと　すでに英米など5か国が公式に支持
* イラワディ: ラングーンの街中に総選挙ボイコットを呼びかけるシールが出回る　ジェネレーション・ウェーブのキャンペーン
* DPA: 国民民主勢力（NDF）、約100人の候補者を立てる予定
■ビジネス・貿易 12:44 ビジネス・貿易 - きょうのビルマのニュース～ビルマ（ミャンマー）関連のヘッドラインニュース を含むブックマーク
* 新華社: ミャンマーの新首都ネピドーに新たに4銀行が開店　テーザー氏など主要実業家が所有
■国境 12:44 国境 - きょうのビルマのニュース～ビルマ（ミャンマー）関連のヘッドラインニュース を含むブックマーク
* イラワディ: 長引くタイ・ビルマ国境閉鎖により地元に経済的打撃
■地域 12:44 地域 - きょうのビルマのニュース～ビルマ（ミャンマー）関連のヘッドラインニュース を含むブックマーク
* ナリンジャラ: 東京のビルマ大使館前で在日ビルマ人がデモ　7月末に逮捕されたアラカン民族の僧侶や若者たちの解放を求める
* ジャパン・タイムズ: 東京に　ミャンマーなどからの難民女性がネイリストとして働く「アルーシャ」
■国際関係 12:44 国際関係 - きょうのビルマのニュース～ビルマ（ミャンマー）関連のヘッドラインニュース を含むブックマーク
* ワシントン・ポスト: 米国、ビルマでの戦争犯罪についての国連調査委員会設置を支持することに　直接対話路線の成果上がらず
* ウォールストリート・ジャーナル: 米国、ビルマでの戦争犯罪についての国連調査委員会設置を支持することに　総選挙前に圧力を強める
開催日時：8/28(土)～9/10(金)　9:30～19:30 ※入場無料
◆初日トーク　8/28(土)14:40の回上映後 (3Fにて)
・ドキュメンタリー『 ピュア　ビルマ難民キャンプの子どもたち 』上映・講演会
日本で発行された　ア　リン　エイン雑誌です。全部ミャンマ語で書いてありますが一を　見た事があるように。。。。
東京都豊島区池袋KOHKAIDO　Hallで　２０１０年７月４日午後４時から９時半まで　ビルマの孤児達の基金のために 音楽会が　行われました。ビルマの歌手である　Yarzar Nay Winさん, Chit Kaungさん, TuTuさん, J-MgMgさん, Eaindra Kyaw Zinさん,Heymar Nay Winさんが　皆さんに　たのしませました。
情報、写真、ビデオを　伝えて下さった　Mai Kyaw Ooさん(http://pnsjapan.blogspot.com)に　感謝致しました。
アウンサンスーチー（ビルマ語:AungSanSuuKyi1.png, Aung San Suu Kyi, 1945年6 月19日 - ）は、ミャンマーにおける非暴力民主化運動の指導者。1991年、ノーベル平和賞受賞。
2010 年1月21日、軍事政権のマウン・ウ内相が地方の会合でアウンサンスーチーについて「軟禁期限となる11月に解放される」と述べていたことが分かった。また、同内相は、最大野党国民民主連盟 (NLD) のティン・ウ副議長も2月に釈放されると語った。
* 『ビルマからの手紙』　アウンサンスーチー 著、土佐桂子・永井浩 共訳、毎日新聞社、1996年12月 ISBN 978-4-620-31147-0　（毎日新聞・Mainichi Daily Newsでの連載を単行本化）
* 『アウンサンスーチー演説集』　アウンサンスーチー 著、伊野憲治 編訳、みすず書房
Posted by Aye Nandar Aung at 3:08 PM0comments
1767 ခုနှစ်က ထိုင်းနဲ့မြန်မာစစ်ပွဲတစိတ်တဒေသ ကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က အခုလိုရိုက်ပြထားသည်။
Posted by Aye Nandar Aung at 10:11 PM0comments
Time to Time Journal (v3,n8)
Posted by Aye Nandar Aung at 7:13 PM0comments
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်းအပေါ် Google တောင်းပန်
လူမှုကွန်ရက် Google Buzz အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးနေသော ဂူဂဲလ် တာဝန်ရှိသူများ (ဓာတ်ပုံ - Reuters)
ဂူဂဲလ် ကုမ္ပဏီက အသစ်တီထွင် လိုက်သည့် လူမှုရေးကွန်ရက် အင်တာနက် စာမျက်နှာ “Google Buzz” သည် အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းပန်လိုက်သည်။Google Buzz ကို ဂျီမေးလ်မှ တဆင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဂျီမေးလ်ဖြင့် မကြာခဏ ပြောဆို ဆက်သွယ်လေ့ ရှိသော လိပ်စာများကို Buzzက အလို အလျောက် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက် ပေးသည်။
ချိတ်ဆက် ထားသူများ ကြားတွင် တခြားဆက်သွယ် အသုံးပြုသူများ၏ မေးလ် လိပ်စာများကို ထပ်မံ မြင်တွေ့နိုင်ပြီး ဂျီမေးလ်တွင် ထည့်သွင်း ရေးသား ထားသည့် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်းများ (Google Profile) ကို တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဂျီမေးလ်နှင့် Buzz ထုတ်လုပ်ရေး မန်နေဂျာ Todd Jackon က “ကျနော် တို့ကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ အတွက် အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်၊ အသုံးပြုသူ တွေရဲ့ အကြံပြုချက် တွေကို အခြေခံပြီး ပိုကောင်းအောင် ကြိုးစား ဆောင်ရွက် နေပါတယ်၊ အကောင်းဆုံး အနေအထား မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာလည်း သဘော ပေါက်သွား ပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
ယခု ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဂူဂဲလ်က အသစ်ဖန်တီးလိုက်သည့် Google Buzz အား အသုံးပြုရန် ဂျီမေးလ် အသုံးပြုသူများကို စတင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးနောက် အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မလုံခြုံမှုများရှိနေသည်ဟူသော ဝေဖန်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ဂူဂဲလ်က Google Buzzအသုံးပြုသူများ၏ မှတ်ချက် (Comment)၊ အခြား ဆက်သွယ်သော သူများကို မှတ်တမ်း တင်ထားမည့် အပြင် ဖုန်းဖြင့် Buzz ကို အသုံးပြုပါက အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေး မှတ်တမ်း၊ ဓာတ်ပုံနှင့် တည်နေရာကို မှတ်သား ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း Buzz ၏ မူဝါဒတွင် ရေးသားထားသည်။
နည်းပညာကို စိတ်ဝင် တစား လေ့လာနေသူ တဦးက “Buzz မှာ ကိုယ်နဲ့ ဆက်သွယ်နေတဲ့ လိပ်စာတွေ အားလုံးကို အခြား ချိတ်ဆက် ထားသူက မြင်နေရတာက ပြဿနာပါ၊ ဒါပေမယ့် Buzz အတွက် အနာဂတ်က ပိုကောင်းဖို့ ရှိတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Google Buzzကို အသုံးမပြုလိုပါက ဂျီမေးလ် Setting တွင် Buzz ဟူသော ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ Disable Google Buzz ကို ရွေးချယ်၍ လည်းကောင်း (သို့) ဂျီမေးလ် စာမျက်နှာ အောက်ဆုံးရှိ “Turn off Buzz”ကို နှိပ်၍သော် လည်းကောင်း ပြင်ဆင်၍ ရနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လူမှုရေးကွန်ရက် စာမျက်နှာများသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများ အကြား ရေပန်းစား လာပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာတ၀န်းလုံး၌ Facebook အသုံးပြုသူ သန်း ၄၀၀၊ ဂျီမေးလ် အသုံးပြုသူ ၁၇၆ သန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by Aye Nandar Aung at 12:34 AM0comments
နယူးရော့ခ်မြို့  (New York) မြန်မာခေတ်ပြိုင် ပန်းချီပြပွဲအကြောင်း
Posted by Aye Nandar Aung at 2:05 AM0comments
အဘ (ဘဘဦးသုခ) . . . ။
(၇) ရက်သားသမီး ဆင်းရဲချမ်းသာ လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး၊ ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ နာရေးကိစ္စအဝဝကို အဆင်ပြောချောမွတ်စွာနှင့် သင်္ဂြိုလ်ပေးနိုင်အောင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ . . . “အဘ”။
အဖ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) . . . ။
အဖ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ . . . အမွေ။
အဖ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ . . . အမွေ။
မြန်မာပြည်သူလူထုကို ကိုယ့်တိုင်း၊ ကိုယ့်ပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် လွတ်လပ်ရေးရရှိအောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ . . . “အဖေ”။
“အဘ”ရဲ့ အမွေကို အထိခိုက်အပွန်းပဲ့မခဲ့ဘဲ ဆက်လက်တိုးပွားအောင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ တစ်ဆင့်တက်၍ “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း” ဟူ၍ အခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးကုသပေြး ခင်းလုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှ အင်အား၊ အလှူရှင်တို့ရဲ့သဒ္ဓါတရားနှ င့် ရဲရဲရင့်ရင့်ဖွင့်လှစ်ပြီြး ဖစ်သလို ယခု “သုခအလင်း” ဟူလေသော စာကြည့်တိုက်ကိုပါ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“သုခအလင်း” . . . ဟုဆိုရာ၌ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများလုပ်စဉ် လူမှုရေးသမားများ၏စိတ်ဓာတ်၊ ခံယူချက်၊ ရည်မှန်းချက်များထိမိအောင် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးတိုးပွားအောင်၊ အနာဂတ်ရဲ့ အားကိုးအားထားရာ၊ အနာဂါတ်ရဲ့ သူရဲကောင်းများဖြစ်ရန်၊ အနာဂါတ်မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်သော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ ပေါက်ဖွားစေရန် ရည်သန်လျက် ဤ “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသောအလင်းတန်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးမည့်၊ ပျိုးထောင်ပေးမည့် လမ်းပြကြည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
ဒီလို “အဘ (ဘဘဦးသုခ) ရဲ့အမွေ” ကို တိုးပွားအောင် ထမ်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရာ၌ အနှောက်အယှက်၊ အတိုက်အခိုက်၊ အဖျက်အဆီးများ . . . များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤတွင် “အဖ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ရဲ့အမွေ” “အဖဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ရဲ့သြဝါဒ” “အဖ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ရဲ့ဆိုဆုံးမမှု” တို့ကို မိမိတို့လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် အသုံးပြုရတော့မည်။
ဤတွင် ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင် “ဖျက်ကနဲ” ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော်၏ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သော ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သော ဘဘဆရာကြီးမင်းသိင်္ခပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပုဏ္ဏားဘကွန်းကို သူ၏ဆရာဖြစ်သော ဖိုးသူတော်ကြီးက လူ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့၊ သူဌေးဖြစ်ဖို့ ပေးလိုက်သည့် ပစ္စည်းများပင် ဖြစ်တော့သည်။
နံပါတ် (၁) မီးအိမ်
နံပါတ် (၂) လွယ်အိတ်
နံပါတ် (၃) ဝါးရင်းတုတ် . . . တို့ဖြစ်သည်။
နံပါတ် (၁) မီးအိမ် ။ ။ မီးအိမ်သည်ကား ဘဝခရီးလမ်းကို လျှောက်ရာ၌ အမှောင်ထုကို ဖြိုခွင်းသွားဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းသောပန်းတိုင်ကို
ရောက်ဖို့အလင်းတန်းများပေးမ ည့် . . . မိမိတို့ရိုးမြေကျသည်အထိ လက်ကိုင်ထားရမည့်အရာ ဖြစ်သည်။
နံပါတ် (၂) လွယ်အိတ်။ ။ လွယ်အိတ်သည်ကား မိမိလျှောက်ရာဘဝလမ်းခရီး၌ မိမိအတွက် အကျိုးရှိမည့် ဆောင်ပုဒ်များ၊ ခံယူချက်များ၊ ဒဿနများ၊ ကုသိုလ်အထုပ်များ စုဆောင်းသိမ်းဆည်းရမည့် အရာဖြစ်သည်။
နံပါတ် (၃) ဝါးရင်းတုတ်။ ။ ဝါးရင်းတုတ်သည်ကား မိမိလျှောက်ရာလမ်းခရီး၌ နှောက်ယှက်သူ၊ ဖျက်ဆီးသူ၊ ဟန့်တားမှုများ၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ရာတွင် သုံးရမည့်အရာ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ခံယူချက် (အများပြည်သူလူထုအတွက်)နှင့်လျှောက်လှမ်းနေသော ကုသိုလ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းခရီး၌ မိမိတို့ရရှိသမျှ ကုသိုလ်ရေးအထုပ်ပစ္စည်းများကို လွယ်အိတ်ထဲထည့်၊ ဘဝရဲ့အလင်း၊ ဘာသာရေးရဲ့အလင်း၊ ငြိမ်းချမ်းမှုအလင်း၊ လူမှုရေးအလင်း ဖန်မီးအိမ်ကိုကိုင်ခါ လမ်းခရီး၌ တားမြစ်ပိတ်ပင် အယူသည်းမှုများကို မိမိတို့၏ လက်ကိုင်ဝါးရင်းတုတ်နှင့် ဖယ်ရှားသွားရမည်ဖြစ်တော့သည် ။
ထို့ကြောင့် “ပုဏ္ဏားဘကွန်းလမ်းစဉ်”ကို ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်တော့သည်။
ဤသို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးလမ်းတစ်လျှောက် ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်သို့  သွားရာလမ်းခရီးတွင် အမှောင်ရှိလျှင် အလင်းပြ၊ ကုသိုလ်အထုပ်များကို သိမ်းဆည်းသကဲ့သို့ အယူသည်းမှု၊ နှောက်ယှက်မှုများကို ရှင်းလင်း၍ သွားသော်လည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရန်စွယ်ကား မသေးလှချေ။ ဆုတ်ကပ်ခေတ်ကြီးရောက်နေပြီ မဟုတ်ပါလား။
ရန်သူအင်အားသည် များလာပြီ၊ အယူသည်းမှုများ တိုးပွားလာပြီ၊ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများ များလာပြီဖြစ်ပါက . . . ။
ကျွန်တော်၏ ခံယူချက် . . . အဓိဋ္ဌာန်ကိုတော့ မည်သို့မျှ မဖျက်။
ကျွန်တော် . . . ကြံ့ကြံ့ခံမည်။
ခံယူချက်၊ ကျင့်ကြံမှု၊ ရည်မှန်းချက်များ လုံးဝအပွန်းအပဲ့မခံ။
တစ်ယောက်အားနဲ့ အများအား . . . ။
အင်အားခြင်းမမျှဖြစ်လာခဲ့သော် . . . ။
တိုက်ပွဲတစ်ပွဲတွင် ရန်သူအင်အားအလုံးအရင်းနှင့် မိမိဖက်မှ အင်အားနည်းသွားပါခြင်း၊ သစ္စာအဖောက်ခံရခြင်း . . . စသည်တို့ကြောင့် မိမိတစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့သော် သင်တို့ကောမည်သို့ လုပ်မည်နည်း၊ မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း၊ ကျွန်တော်ကတော့ အသေခံ၍ တိုက်မည်။
ရန်သူ၏ သိမ်းသွင်းမှုကို မခံနိုင်။
နောက်ဆုံး . . . မိမိတွင် ကျန်ရစ်သော ကျည်တစ်ထောင့်၊ ဗုံးတစ်လုံး . . . ဓားတစ်ချောင်းဖြင့် . . ။
ပုဏ္ဏားဘကွန်းကို သူ၏ဆရာ ဖိုးသူတော်ကြီးပေးလိုက်သည့် ပစ္စည်များတွင် နောက်ဆုံးနံပါတ် (၄) ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါသေးသည်။
ယင်းပစ္စည်းသည် . . . “မင်းလိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို . . . ရက် . . . လ . . . နှစ် - နောက်ဆုံးထားပြီးသွား”။
“အေး . . . အဲဒီ့နေ့ရက်ရောက်လို့မှ မင်းလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်၊ မင်းသွားချင်တဲ့ နေရာ၊ မင်းရောက်ချင်တဲ့ ဌာနကိုမှ မရောက်ခဲ့ရင် မင်းအဲဒီ့အဆိပ်ပုလင်းကိုသာ သောက်ချလိုက်တော့” ဟုဆိုကာ ဘကွန်း၏ လည်ပင်းတွင် ကြိုးနှင့်အဆိပ်ပုလင်းကို ချိတ်၍ ဆွဲပေးခဲ့သည်။
ဟုတ်သည် . . . ကျွန်တော့်တွင် နောက်ဆုံးလက်နက်ရှိသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သစ္စာတရားတို့ကိုတော့ လုံးဝအထိအခိုက် အပွန်းအပဲ့မခံနိုင်တော့။ ကျွန်တော့် ကိုယ်လွတ်ရုန်းခြင်းမဟုတ်။ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာကိုလည်း မကြောက်တော့။ အဓိဌာန်ကိုတော့ မဖျက်နိုင်တော့ချေ။
ဒါကြောင့် . . ရန်သူ၏သတ်ကွင်းထဲသို့ ရောက်ခဲ့လျှင် ထွက်ပေါက်ကို ရှာရမည် မဟုတ်ပါလား . .။
ယင်းထွက်ပေါက်သည် . . . ?
အမေလက်ဆင့်ကန်းပြောထားတာ . . .
“စိတ်မပျက်နဲ့၊ စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့” တဲ့။
“ကျွန်တော် စိတ်မပျက်ပါဘူး၊ စိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး အမေ
ဒါကြောင့် . . . စိတ်နာနာနဲ့ ချရေးမိတာပါ ခင်ဗျာ။
Posted by Aye Nandar Aung at 1:55 AM0comments
Posted by Aye Nandar Aung at 11:35 PM0comments
AIO Wifi Hack 2010 လေးပါခင်ဗျား။ မြန်မာ ပြည်က သူတွေအတွက် အကျိုး ရှိမယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော့ ကို ကောင်းပြီး လူတိုင်း လေ့လာ ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရေးသားထား တာက လဲ နားလည်လွယ်ပြီး ရှင်းလင်းပါတယ်။ အောက်မှာ သူ့ရဲ့ Tutorials လေးတွေကို ဥပမပြထားပါတယ်ခင်ဗျား။
* Windows Tools 1
* Windows Tools 2
* Pdf's Tutorials
* Bonus Software
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ Software လေးတွေက မကပါဘူးခင်ဗျား။ ကျန်ပါသေးတယ်။ AIO Wifi Hack 2010 ကိုလိုချင်ရင်တော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ Link ကနေတဆင့်သွားပြီး Download လုပ်လိုက်ကြပါ။ အားလုံး ကို ကျွန်တော် တက်နိုင်သလောက် Free ပေးနေပါတယ်။
Download AIO Wifi Hack 2010
Posted by Aye Nandar Aung at 12:51 AM0comments
ထိုင်းနိုင်ငံ၊မဲဆောက်မြို့ဝပ်မဏိအမိုနီကျောင်းဆရာတော်၏တရားပွဲသို့ မဲဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာပြည်သား(၂၀၀၀၀)ကျော်လာရောက်ပြီးဓမ္မပူဇာသဘင်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တရားပွဲတွင်းကောက်ခံရရှိသောအလှူတော်ငွေစုစုပေါင်းမှာ ဘတ် (၆၁၀၀၀)ကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။
Posted by Aye Nandar Aung at 11:47 PM0comments
ပါမောက္ခ မဟာသရေစည်သူ ဒေါက်တာ ဘဟန် (၁၈၉၀-၁၉၆၉)
(၁)မြန်မာ့ရေးရာကျွမ်းကျင်သူဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံ၏ အသံစုံ အကြံကုန်ကို ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ လှိုင်းတိုရေဒီယိုများနှင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ဟုန်နေအောင် ကြုံဖူးနေကျ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ထိုအထဲ နိုင်ငံစုံက ဘွဲ့ပေါင်းစုံရထားသည့် ပါရဂူဒေါက်တာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဆိုသည်ကို ကြားတိုင်း မြန်မာထဲက အစောဆုံးပါရဂူဘွဲ့ရ ဒေါက်တာကြီးတယောက်၊ မြန်မာပြည်က အင်္ဂလိပ်စာလိုက်စားသူတိုင်းလိုလို သိကြသည့် ကျေးဇူးရှင်ဒေါက်တာတယောက်ကို သတိရမိပါသည်။
ကာလပေါ် ဒေါက်တာများက မြန်မာပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုပညာတွေဖြန့်ဝေပေးမည်မသိသော်လည်း ထိုဒေါက်တာကြီး၏ ကျေးဇူးကတော့ ယခုထိ ထင်သာမြင်သာရှိလှသည်။ သူနှင့် တပြိုင်တည်းလိုလို ပါရဂူဘွဲ့ရပြီး ဟိုလွန်လေပြီးသော ၆၅ နှစ်က မြန်မာပြည်တွင် အာဏာရှင်အဓိပတိမင်းကြီးအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးခဲ့သည့် သူ့ညီ ဒေါက်တာဘမော်ကို ခုခေတ်လူတွေမေ့ကြ သော်လည်း အနှစ် ၄၀-၅၀ က သူပြုစုခဲ့သော တက္ကသိုလ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်မှာ ယခုထိ မြန်မာပြည်တွင် အသုံးကျဆဲ ထွက်သမျှ ရောင်းမလောက်ဆဲ ဖြစ်ပါ၏။
သူနှင့် တနှစ်တည်း ဘီအေအောင်သော ပါမောက္ခ ဖေမောင်တင်မှတ်ချက်အရ“ဤအဘိဓာန်ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် မြန်မာ စာသင် သားတို့အား အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုပေးနိုင်သကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လဲ မြန်မာဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှု တွင် အကူအညီ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်”ဟူသတည်း။ အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားများကို မြန်မာပြန်ဆိုရာတွင် မြန်မာပီပီသသ ထိမိလှပစွာ ပြန်ဆိုသည်ဟူ၍လဲ မှတ်ချက်ချထားသည်။
ထူးသည်က ထိုသို့ မြန်မာဘာသာပိုင်နိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခံရသော ပါရဂူကြီးမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါ။ အာမေနီယန် စပ် သည့် မြန်မာခရစ်ယာန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာစာပေနှင့် စကား လူရာမဝင်ဆုံးခေတ်၂၀ ရာစုဦး ဝံသာနုမပေါ်မီခေတ်တွင် လူဖြစ်သော မျိုးဆက်လည်း ဖြစ်ရုံမက စိန်ပေါလ်ကျောင်း၊ ရန်ကုန်ကောလိပ်၊ ကာလကတ္တားနှင့် ကိန်းဘရစ်ခ်ျ၊ ဘော်ဒိုး၊ ဖရိုင်းဘတ် စသည့် ဥရောပ တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ပညာရှာခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဘွဲ့ရခါစကလည်း အစိုးရစာတော်ပြန်ဌာန ခေါ်သော ကိုလိုနီအစိုးရမင်းတို့၏ လက်သပ်မွေးဌာနတွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသေးသည်။
သို့သော်လည်း မောင်ဘဟန်၏ ဖခင် မောင်မောင်ကျေးမှာ ၁၈၇၀ ကျော်က ကင်းဝန်မင်းကြီးနှင့် ဘိလပ် ပရန်သစ် စသော အနောက်ကျွန်းက တိုင်းပြည်ကြီးများသို့ သွားသော ဒယ်လီဂိတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ပညာတော်သင် မသွားရခင် သီပေါမင်း ပါတော်မူသွားသဖြင့် သထုံဘက်တွင် ပုန်ကန်ထကြွစဉ် အရေးနိမ့်၍ ယိုးဒယားပြည်သို့ တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ရသည်။
စိန်ပေါလ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီးများအုပ်၍ ကြီးခဲ့ရသော မောင်ဘဟန်မှာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာသော်လည်း မြန်မာစိတ်မပျောက်ပါ။ ညီဖြစ်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မောင်ဘမော်နှင့်လည်း အနေမစိမ်းဘဲ ချစ်ချစ်ကြင်ကြင်ရှိလှပါ၏။ စာတော်ပြန်ဌာနတွင် အမှုထမ်းနေစဉ် မြန်မာပညာရှိတို့ထံမှ စာပေယဉ်ကျေးမှုတို့ကို နည်းယူဆည်းပူးခဲ့ရုံမက ဦးဖေမောင်တင်၏ဘကြီး စာတော်ပြန်ဝန်ထောက် ဦးထွန်းငြိမ်း၏ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန် ပြန်လည်တည်းဖြတ်ပုံနှိပ်ရာတွင် ကူညီခဲ့၍ အသက်၂၀ကျော်ကပင် အဘိဓာန်ပညာကို အရေလည်လာခဲ့သည်။
ဥရောပတွင်လည်း ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်ဘာသာတို့ကို ကျွမ်းကျင်အောင် သင်ယူခဲ့ကာ အင်္ဂလိပ်စာဆို ဝီလျမ်ဘလိတ်၏ အရေးအသားအကြောင်း ကျမ်းပြုပြီး ပါရဂူဘွဲ့ယူခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို အထူးလိုက်စားခဲ့သဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အလွန်ပိုင်နိုင်လာခဲ့သည်။ သို့တွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပဒေမဟာဌာနမှူးဘဝမှ ပင်စင်ယူပြီးနောက် ၁၅ နှစ်အချိန်ယူပြီး လွတ်လပ်ပြီးခေတ် မြန်မာလူငယ်များ ကမ္ဘာနှင့်ပေါင်းကူးရာတွင် အရာရောက်လှသည့် ဤအဘိဓာန်ကြီးကို ပြုစုခဲ့လေသည်။ ထိုအတောအတွင်း ၁၉၅၈ က ဦးနု၏ သုံးလခံ သန့်ရှင်းဖဆပလအစိုးရတွင် ရှေ့နေချုပ်တာဝန်ယူခဲ့ရသေးသည်မှအပ တရားဝန်ကြီးချုပ်၊ သမ္မတ စသည့် အခြားဥပဒေပါရဂူကြီးတွေမျှော်တတ်သည့် ဖုတ်သွင်းရထားများကိုလည်း အာရုံမပြုခဲ့။
အဘိဓာန်သာမက မြန်မာစာပေ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စာတမ်းများရေးသားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်း မစုစည်းနိုင်ဘဲ တိမ်မြုပ်လုဖြစ်နေသည်က ဝမ်းနည်းစရာပါပေ။
ရှင်ဥတ္တမကျော်တောလားနှင့် လက်ဝဲသုန္ဒရ ရတုများကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုခြင်း၊ စိန္တကျော်သူ ကဗျာများ၊ ဦးပုည၏ ဝိဇယ ပဒုမ ပြဇာတ်များ၊ ဝန်စာရေးဦးကြီး၏ ချဉ်ပေါင်ရွက်သည်မောင်မှိုင်း ဝတ္ထုစသည်တို့ကို ဝေဖန်စာများ၊ ရှေးမြန်မာကျေးလက်နှင့်မိသားစု လူမှုဘဝ စသည့်ကြောင်းရပ်ဖြာဖြာနှင့် စပ်လျဉ်းရေးသားခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ပထမခေတ်သစ်မြန်မာအမျိုးသမီးစာရေးဆရာ မအေးခင်၏ ချစ်ရိုးအမှန် ဝတ္ထု (၁၉၀၉) သုံးသပ်ချက်မှာ ၁၉၁၇ က ရေးသည်ဖြစ်၍ မြန်မာကာလပေါ်ဝတ္ထုကို အစောပိုင်းဝေဖန်စာတပုဒ်အဖြစ်ရော မည်သူမှ မတွေ့ဘူးတော့သလောက်ရှိသည့် မအေးခင်ဝတ္ထုအကြောင်းလေ့လာရာတွင်ပါ အသုံးဝင်လှသည်။ သူကဲ့သို့ ခေတ်ပေါ်မြန်မာစာပေကို စိတ်ဝင်တစား ဝေဖန်ချက်ရေး သူ ဟူ၍ ၁၉၁၀ကျော်က အိုင်စီအက်စ် ဂျေအေစတီးဝပ် (နောင် လန်ဒန်တက္ကသိုလ် ပထမဆုံး မြန်မာဘာသာပါမောက္ခနှင့် အိန္ဒိယ၊ မြန်မာ၊ သီဟိုဠ် (အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ကျွန်းစုများ) ဌာနမှူး လောက်သာ ရှိပါသည်။
ဒေါက်တာဘဟန်သည် သုတေသနတန်ဖိုးကိုသိသူဖြစ်ရုံမက ပညာနှင့်ယှဉ်သော မျိုးချစ်စိတ်လည်း ရှိသည်။ ပါမောက္ခလုစ်၏ “မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က” ဟု လူသိများသည့် စာတမ်းကို တယူသန်နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ပညာရှင်များ ကန့်ကွက်သည့်ကြားက ကိုယ်စားဖတ်ပေးခဲ့သလို မြန်မာတို့အပေါ် တဖက်သတ်နှိမ့်ချရေးသားသည့် ရာဇဝင်ဆရာ ဟာဗေး (အိုင်စီအက်စ်)အား ၁၉၃၀ တဝိုက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဂုဏ်ထူးဆောင် စာပေပါရဂူဘွဲ့နှင်းမည့်အကြံကို ဘိလပ်ပြန်မင်းတိုင်ပင်အမတ် ဦးစိုးညွန့် (ပထမဆုံး အမေရိကန်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်) နှင့်အတူ ဦးဆောင်ကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့် အကြံပျက်သွားခဲ့ဖူးသည်။
စာတော်ပြန်ရုံးတွင် မျက်နှာဖြူအရာရှိတို့၏ မတရားဖိနှိပ်မှုကို မခံလိုသဖြင့် ဥရောပသွားကာ ပါရဂူဘွဲ့ယူပြီး ပြန်အလာတွင် ဝတ်လုံလိုက်ကာ အသက်မွေးခဲ့သည်။
အစိုးရလက်အောက်သို့ ၁၉၆၂ မှ ကျရောက်သည့် သီးခြားလွတ်လပ်သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ဥပဒေဌာနတွင် မဟာဌာနမှူး ဖြစ်သည်အထိ အနှစ် ၂၀ကျော် ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ ဆရာစံသူပုန်အပြီး စုစုပေါင်း လယ်သမား ၁၀၂ ယောက်ကို “နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ဖျက်ပုန်ကန်မှု”နှင့်တရားစွဲသောအခါတွင်လည်း တရားခံများဘက်က ဂဠုန်ဦးစော၊ သာယာဝတီ ဦးပု စသည့် တခြားနိုင်ငံရေးသမားရှေ့နေများနှင့်အတူ ဒေါက်တာဘမော်နှင့် ဒေါက်တာဘဟန်တို့ ညီအစ်ကိုလိုက်ပါ လျှောက်လဲ ပေးကြသည်။
ဂျပန်ခေတ်က ညီဖြစ်သူ အထွဋ်အထိပ်ရောက်စဉ်ကလည်း ဘာရာထူးမှ မယူဘဲ ကမ္ဘာနှင့်မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းကူးစည်ပင်ရေး အတွက် ဖွဲ့သော ပြင်သစ်အကယ်ဒမီပုံစံ ပညာတံခွန်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌသာ လုပ်ခဲ့ပြီး စွယ်စုံကျမ်းနှင့် မြန်မာအဘိဓာန် စတင်ပြုစုရေး အတွက် လမ်းဖောက်ပေးခဲ့ကာ ဂျပန်ခေတ် အတွေ့အကြုံကို The Planned State တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
သန့်ရှင်း-တည်မြဲ အကွဲတွင် ကြားက ဝင်ညှိပေးခဲ့သော်လည်း တရားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဧမောင် အခြေခံဥပဒေကို လိုရာဆွဲသုံးပြီး ဦးနု၏ ယိုင်လုလုသန့်ရှင်းအစိုးရပြုတ်မကျအောင် ဘတ်ဂျက်ကို သမ္မတအမိန့်နှင့် အတည်ပြုခိုင်းသော ပညာရှင်မဆန်သည့် အကြံမျိုး ပေးသကဲ့သို့ အလိုတော်ရိနည်းမျိုးနှင့် ပညာဈေးမချခဲ့ပါ။
အိန္ဒိယအင်ပါယာတွင်းက ကျေးတော်မျိုး ကျွန်တော်မျိုးပြည်နယ်တခုကနေပြီး ဥရောပက ပါရဂူဘွဲ့ယူပြခဲ့သည့် သူတို့ညီအစ်ကို စံနမူကြောင့် ဒေါက်တာထင်အောင်၊ ဒေါက်တာလှဘူး၊ ဒေါက်တာတန်ဘလှီ၊ ဒေါက်တာမောင်သိန်း စသည့် စစ်ကြိုခေတ်မြန်မာ ပါရဂူများ၊ ဒေါက်တာဘမော် နန်းရင်းဝန်ဘဝက လွှတ်သည့် ဒေါက်တာလှဘေ၊ ဒေါက်တာလှမြင့်၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်ခ စသည့် စစ်တွင်း ဘိလပ်ပါရဂူများ၊ စစ်ပြီး ဖဆပလနှင့် မဆလ လက်ထက် အနောက်နှင့် အရှေ့အုပ်စုတွင် ဒါဇင်နှင့်ချီပြီး ပါရဂူဘွဲ့ယူသူများ၊ အရးအခင်းနောက်ပိုင်း အတိုက်အခံနှင့် အစိုးရတို့က အသီးသီးအသကလွှတ်သော နိုင်ငံစုံနှင့် ပြည်တွင်းဖြစ် ရာနှင့်ချီသော ပါရဂူ များ စသည်ဖြင့် မြန်မာပါရဂူရေစီးမှာ ၈၅ နှစ်ကျော် ရှည်ကြာခဲ့လေပြီ။ ၁၉၅၀ ၌ ပထမဆုံးမြန်မာအမျိုးသမီး ပါရဂူ အဖြစ် ပထဝီဝင် ပညာတွင် ဒေါ်သင်းကြည်က အမေရိကန်မှဆွတ်ခူးသည်။ ဒေါက်တာဘဟန်ချွေးမ မြန်မာ ခရစ်ယာန် ကလျာဏယုဝတီ အသင်း ဒု ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း အမ္မာဘရုပ်ညွန့်ဟန် ခေါ် ဒေါ်အေးသန့်သည်လည်း အမေရိကတွင် လူမှုဝန်ထမ်းပါရဂူဘွဲ့ ယူခဲ့သည်။
သူကွယ်လွန်ချိန်က“ဒေါက်တာဘဟန်သည် မြင့်မြတ်တော်ဖြောင့်သော လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးပြီး မတုန်လှုပ်သော သမာဓိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသည်”ဟု သူ့နေရာ ဥပဒေမဟာဌာနမှူး တာဝန်ကို ဆက်ခံသော လွှတ်တော်ချုပ် တရားဝန်ကြီးဟောင်း ဦးကျော်မြင့် (အာဇာနည်လုပ်ကြံမှု ခုံရုံး တရားသူကြီး)က ချီးကျူးခဲ့ပါသည်။
မှန်ပါသည်။ ဒေါက်တာကြီးသည် ကွယ်လွန်ခါနီးတွင် သမီးရေးမြေးရေးမပြေလည်သည်အထိ တော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး ငြိုငြင်ခံခဲ့ရသော်လည်း တချို့တချို့သော ပါရဂူ လူတတ်တို့ကဲ့သို့ စစ်အစိုးရစိတ်ကြိုက် တက္ကသိုလ်မဟာဌာနများ၏ စုစည်း ညီညွတ်မှုကို သီးခြားတက္ကသိုလ်များအဖြစ်ခွဲခြားပစ်သော၊ ပညာရပ်စာအုပ်သစ်များကို အလျဉ်မီ ဘာသာပြန်နိုင်သည့် လူအင်အား မရှိဘဲ မြန်မာဘာသာကို သင်ကြားရေးမဏ္ဍိုင် လုပ်ခိုင်းသော စသည့် ပညာရေးရာဇဝတ်မှုများဖြင့် မျိုးဆက်သစ်များကို အညွန့်ကျိုး အောင်လုပ်ပြီး ကျွန်ခေတ်တွင် လူရာဝင်အောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျိုး ဘယ်ခေတ်တွင်မှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ ပညာရေးနှင့်ဘာသာရေးတို့ တွင်သာ သက်ဆုံးတိုင် မြှုပ်နှံသွားသော ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါသည်။
ထို့ထက် မြန်မာစာပေနှင့် လူမှုဓလေ့ကို မြတ်နိုးလိုက်စားသော၊ ပေမီဒေါက်မီ အဘိဓာန်ကျမ်းပြု မြန်မာ့ရေးရာကျွမ်းကျင်သူ ပါရဂူ စစ်စစ် ဟု ဂုဏ်ပုဒ် တပ်လောက်သောသူလည်း အဟုတ်ဖြစ်ပါ၏။
မောင်ဇေယျာ။ ။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကျမ်းပြု ဥပဒေပညာရှင် (ဒေါက်တာဘဟန်)၊
ကမ္ဘာသိမြန်မာများနှင့် ကမ္ဘာသိမြန်မာ စာအုပ်များ၊ ယူနတီစာပေ၊ ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာ၊ ရန်ကုန်။
(ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ ရက်နေ့က ကျရောက်သော ဒေါက်တာ ဘဟန်၏ နှစ် ၁၂၀ မြောက် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဤဆောင်းပါးကို ဂုဏ်ပြု ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by Aye Nandar Aung at 1:55 PM0comments
မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်။
“မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း” စကားအရ “ဖြစ်လျှင်ပျက်မည်” ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းတို့သည် ရုပ်ဝတ္ထုတို့နှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ စိတ်သတ္တိ နှင့် မသက်ဆိုင်ချေ။
မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း ကြား...ကာလ၌ အများအတွက် အကျိုးပြုမည့်၊ အကျိုးရှိမည့် အရာများကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးရမည့် တာဝန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူမှုရေးသမားများ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘဘဦးသုခ ရည်မှန်းမျှော်လင့် မျိုးဆက်ချပေးခဲ့သော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ပြည်သူလူထုတို့ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ရာမှ “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း” ဟူသော အခမဲ့ဆေးဝါးကုသပေးသော ကုသိုလ်ကို ရယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုတစ်ဖန် . . . “သုခအလင်း” စာကြည့်တိုက်ဟူ၍ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအတွက် ရည်သန်လျှက် မွေးဖွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့သည် ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ရဲရင့်သော ခံယူချက်များ ဖြစ်သော
“ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်ယံ . . . ၊ ယင်းမှောင်မိုက်အတွင်းမှနေ၍ အရှုံမပေးသော ငါ့စိတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသူ နတ်၊ သိကြားကို ငါသည် ကျေးဇူးစကားဆိုပါ၏။ လောကဓံတရား၏ လက်ခုပ်အတွင်းသို့ ဘယ်လိုပင်ကျရောက်စေကာမူ ငါကား မတုန်မလှုပ်၊ မငိုကြွေး။ လောကဓံတရား၏ ရိုက်ပိုက်ခြင်း ဒဏ်ချက်ကြောင့် ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ဖြင့် ရဲရဲနီနေ၏၊ သို့သော် ညွတ်ကားမညွတ်။
လောဘဒေါသတို့ ကြီးစိုးရာဌာန၏ အခြားမဲ့၌ကား သေခြင်းတရားသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ငံ့လင့်နေ၏။ သို့ပင်မူ ငါ့အားမတုန်လှုပ်သည်ကိုသာ တွေ့ရပေအံ့။ နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက်သည်ကို တွေ့ရပေအံ့။” . . . ဟူသောစကားလုံးများသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ခိုင်မာရဲရင့်သော အားဆေးများပင်ဖြစ်တော့သည်။
BURMA (The Power of People) http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2010/02/blog-post_5666.html
Posted by Aye Nandar Aung at 12:25 AM0comments
ဒီနစ် ဟော လိဝုဒ် ( Hollywood) အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ တစ်ပြေးနေတဲ့ Burma VJ မှတ်တမ်းကား အပြည့်အစုံ
ဒီနှစ် ဟောလီးဝုဒ်မှာ အကယ်ဒမီဆုရဖို့Burma VJ တစ်ပြေးနေပြီ။
ဒီမှတ်တမ်းကား အစ အဆုံးကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မကြည့်ရသေးသူတွေ အတွက် ကြည့်လို့ရတဲ့ လင့်ခ့် ကို ရှာပေး လိုက်ပါတယ်။
ဘုရားသားတော်တွေက ဒုက္ခရောက် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကို မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြ တာ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ က လက်အုပ်ချီ ဦးခိုက်ပြီး ဘုရားသားတော်တွေ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းတာကို ဝမ်းသာကြတာ တွေကို တကမ္ဘာလုံး က ယနေ့ထက်တိုင် မမေ့ရက်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
သန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ ဘာသာမဲ့ နအဖ တို့ လုံထိမ်း တွေ စစ်တပ်တွေ ကြံ့ဖွတ်တွေ နဲ့ ဘုရားသားတော်တွေ ပြည်သူလူထုတွေ ကို ရက်ရက်စက်စက် လူမြင်ကွင်းမှာ ရိုက်နှက်တာတွေ ၊သံဃာတော်တွေ သတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းတိုက်တွေကို သူပုန်စခမ်းလို ဝင်စီးခဲ့ကြတာ၊ ကျောင်းတိုက်တွေကို ဖျက်စီးခဲ့ကြတာ၊ ဝင်စီးပြီး ဘုရားသားတော်တွေကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး ခဲ့ကြတာတွေ၊ ဘုရားသားတော်တပါးဒဏ်ရာတွေ နဲ့ ရေထဲမှာ မှောက်လျှက် ပျံလွန်တော်မူနေတဲ့သတင်းဓါတ်ပုံ၊ သတင်းယူနေတဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက် လမ်းပေါ်မှာ ကင်မရာကိုင်သတင်းယူရင်း အနီးကပ်ပစ် သတ်ခံခဲ့ရတာ၊ စတာတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာ သမိုင်း အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားများကို ကမ္ဘာတလွှားက ဘာသာခြားများကပါ အံ့ဩတုန်လှုပ်ခဲ့ ကြရပါတယ်။
Burma VJ ဟာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ပြည်တွင်းသတင်းထောက်တွေက အသက်စွန့် ရိုက် ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းတင်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကွယ်ပျောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့ ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့ ။
မမေ့မလျှော့မပေါ့သော သူများဖြစ်ကြပါစေ။ ဗုဒ္ဓသာသနာ နေရောင်လရောင် ထွန်းလင်းပါစေ။
Posted by Aye Nandar Aung at 11:48 PM0comments
နေ့ရက် ။ ။ ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့ (စနေနေ့)
နေရာ ။ ။ Myanmar Info-Park (Room 205)
အချိန် ။ ။ နံနက် (၈)နာရီခွဲ မှ နေ့လည် (၃)နာရီအထိ
နံနက် (၈)နာရီခွဲမှ (၉)နာရီခွဲ ။ ။ Introduction to Opensource
Opensource ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Opensource ၏ အကျိုးအပြစ်များ။ Opensource ၏ ရည်ရွယ်ချက်။ Opensource Business Model စသည်တို့အား ၀ါရင့် Opensource ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးမှ ဟောပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ Opensource နှင့် ရင်းနှီးချင်းမရှိသည့် လူငယ်များ၊ Opensource နှင့်ပက်သက်ပြီး ရှိနေသည့် ၀ိရောဓိများအား ရှင်းလင်းစေရန်၊ Opensource ၏ တန်ဖိုးအမှန်ကို သိရှိစေရန်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
နံနက် (၉)နာရီခွဲမှ (၁၀)နာရီခွဲ ။ ။ Demonstration
Ubuntu Linux OS အား USB Flash Drive တစ်ခုမှ လက်တွေ့ Boot လုပ်ပြခြင်း၊ နေ့စဉ် ကွန်ပြူတာအသုံးပြုမှုအား Linux ဖြင့်လည်း ၁၀၀% ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း လက်တွေ့ပြသခြင်းနှင့် အခြား စိတ်ဝင်စားဖွယ်များကို လက်တွေ့ ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။
နံနက် (၁၀)နာရီခွဲမှ (၁၁)နာရီ ။ ။ Short Break
နေ့လည် (၁၁)နာရီမှ (၁၂)နာရီ ။ ။ Lightning Talk
တက်ရောက်လာသည့်သူများမှ Opensource နှင့်ပက်သက်သည့် မိမိတို့၏အမြင်များ၊ အတွေ့အကြုံများကို ပြောဆို ဖလှယ်ကြမည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမပိုင်းတွင်းပြောကြားသွားသည့် Opensource အကြောင်းနှင့်၊ ပြသခဲ့သည့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် အမြင်များကိုလည်း ထပ်ဆင့် ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Lightning Talk အစီအစဉ်တွင်း တစ်ဦးလျှင် (5-10) မိနစ်ခန့် ပြောဆိုရန် အခွင့်အရေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပြောဆိုလိုသူများ၊ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ ဤနေရာတွင် စာရင်းပေးနိုင်ပါသည်။
နေ့လည် (၁၂)နာရီမှ (၁)နာရီ ။ ။ Hang On Session
တက်ရောက်လာသူများ စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်စေရန် အသင့် Install လုပ်ထားသည့် Linux PC များ ထားရှိပေးမည်ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် ရှိလာသည့် အခက်အခဲများကိုလည်း အတူတကွ ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့လည် (၁)နာရီ မှ (၂)နာရီ ။ ။ Open Discussion
တက်ရောက်လာသူများမှ မိမိတို့၏ အမြင်များကို Member Gathering မှာကဲ့သို့ပင် လွပ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးနိုင်မည့် အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့လည် (၂)နာရီ မှ (၃)နာရီ ။ ။ Forum
အနာဂတ်တွင် အချိန်မှန် (ဥပမာ။ ။ လေးလတစ်ကြိမ်) ကျင်းပမည့် Event များတွင် ပါဝင်ကူညီလိုသူများမှ၊ ရှေ့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လုပ်ပြုလုပ်သင့်သည့် Event များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး နောင်တွင် ဤကဲ့သို့သော Event များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂.) MITP T-Shirt ပေးပါမည်။
၃.) ကို Jake မှာ Ubuntu တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်ထားသည့် ဘောပင် များနှင့် စတေကာများ ဝေငှပါမည်။
၄.) ကို Jake မှပင် Demonstration တွင် ပြသထားသည့် Ubuntu Linux Install လုပ်ထားသည့် USB Flash ကို မဲဖောက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅.) MITP မှ ကြီးမှုးကျင်းပသည့် Event ဖြစ်ပါသည်။
တက်ရောက်မည့် လူအင်အား ခန့်မှန်းလိုပါသဖြင့် တက်ရောက်မည့်သူများ ဤနေရာတွင် စာရင်းပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Lightning Talk အစီအစဉ်တွင် ပြောဆိုလိုသူ အမည်နှင့် ပြောဆိုလိုသည့် ခေါင်းစဉ်များကိုလည်း ကြိုတင် အသိပေးကြစေလိုပါသည်။
Posted by Aye Nandar Aung at 2:44 PM0comments
Khuthodaw Rice Donation Leaflet
Posted by Aye Nandar Aung at 2:13 PM0comments